Nsonaazụ Project - "Ntugharị Mbepu Mmiri Maka Nduku Na-amịpụta Maximization" - Potatoes News
Nsonaazụ Project - “Subsurface ntapu nta mmiri maka mmiri nduku maximization”
Agha, tinye teepu teepu ma mepụta mkpuchi uzuzu n'otu uzo. Hectare mbụ nwere ihe ngosipụta nke echiche a pụrụ iche ga-agbanye n'oge na-adịghị mma na ala aja aja nke Drenthe. Nsonaazụ ndị e buru n'amụma nwere ezigbo olile anya. "Ọ dịghị ụzọ ọzọ karịa na anyị ga-eweta na ụma revenue na nke a."
Onye nwe ya Cor Mechielsen nke Loonbedrijf Gerrits na Zwinderen kọwara, sị: “Site n’ịkụ eyịm n’elu ala aja ị maara otu ihe doro anya, n’otu oge ị ghaghị ịgba mmiri. Onye ọrụ ngo ahụ chere na ọ chọtala ezigbo ihe ngwọta iji were akọbasị na-akọ ala na aja aja na ọkwa dị elu. Echiche bụ iji mkpụrụ mbụ na Europe maka oge mbụ n'oge oge, nke na-agha mkpụrụ na otu ngafe, na-etinye teepu ntapu ma tinye ihe mgbochi mgbochi. Ọ na-emetụta ihe ngosipụta, mana emebeghi ya, gafere ọtụtụ awa na ụlọ ịbịaru yana na ogbako na ụlọ ọrụ Tijms na-arụ ọrụ na Geesbrug.
Naanị debe ụlọ mkpụrụ
N'ezie, ọ bụ naanị ụlọ mkpụrụ nke ọhụụ ọhụụ ọhụrụ nke anọ nke ihe ndọtị ka ejirila. Igwe ndị Italiantali ga-enwe obosara ọrụ nke 6.75 mita (ugboro atọ akwa nke 2.25 mita) nke nwere ike itinye ahịrị asatọ n'ụzọ dị nkọ n'otu akwa. A na-etinye ahịrị anọ nke Toro AquaTraxx drip teepu n'etiti ahịrị ndị ahụ na arụ ọrụ mbụ na akwa ọ bụla na-eji diski diski, na-esote mkpụrụ yabasị. Site na coulter, ma nkpuru ma nkpuru mmiri na-ekpuchi ala.
Ejiri na teepu kpuchie ekele maka ịgha mkpụrụ
N'ime ọrụ ikpeazụ, etinyere stachi emulsion, ihe mkpuchi uzuzu uzuzu, jiri akwa nozzles ise n'otu akwa. Nke a bụ nrapado biodegradable kpamkpam nke gbanwere starch gbanwere na mkpo. A ga-etinye nozzles iri na ise na mmanya na n'elu ikpo okwu n'elu ebe ndị ọrụ nwere ike iguzo ma ọ bụ ikekwe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọzọ.
Ngwurugwu nkpuru osisi puru iche bu uzo ohuru na mmepe ogbugba mmiri. Iji mmiri aghara aghara bụ ihe ịma aka na-eche ọrụ ugbo Dutch. Sga n’ihu nnu nnu na-egosi na ojiji nke mmiri dị n’elu ala enweghị ike imebi emebi. Dị ka onye nkwekọrịta m were ụlọ ọrụ a na Zwinderen afọ abụọ gara aga. Anaghị m arụ ọrụ n’elu ájá ogologo oge, ma nke ahụ bụ ihe ịma aka magburu onwe ya. N’afọ abụọ ahụ, anyị enweela oke ọkọchị. Ga ahu ndi na etolite n’ime ogbugba mmiri zuru oke ma ibido ikwu okwu. Ripgba mmiri mmiri bụ otu n'ime isiokwu ndị a tụlere ”, Mechielsen na-akọwa,
Mmiri si na olulu mmiri
“Anyị na-enweta ọtụtụ mmiri ebe a na mpaghara site na isi mmalite yana ọbụlagodi ebe ahụ, nnweta na-abụwanye nsogbu. Mgbe anyị na-ekwu maka mmiri dị n’elu mmiri, anyị na-ahụ ebe a na ire ere aja aja bụ nsogbu. Ihe ndị a niile bụ ihe chọrọ ka anyị jiri mmiri rụọ ọrụ nke ọma. Ala bu oke oke ọnụ ghara ịgbara mmiri. Anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ ihe na-adịghị mma, mana ọ bụrụ na ị lee anya nke elu nke evaporation n'oge a na-agba mmiri, anyị ga-eleba anya na ngwọta ndị ọzọ. ”
Drenthe mmiri oru ngo
Mmepe nke mkpụrụ ahụ sitere na Sistemụ Mmịpụta Onwe Onye Na-achịkwa Onwe Ya maka Ọrụ Ndaba Maximization (ZOBAM +) na Drenthe na Groningen. Johan Tijms nke Tijms Mechanisatie na-akọwa, sị: “Ọ bụ echiche banyere ịgba ala mmiri nke anyị na-anwa ịbawanye ụba mkpụrụ na poteto.” “Anyị na-elezi anya n'ubi ndị ọzọ.”A na-eji ihe mmetụta okpomọkụ na mmiri na-anwa inye mmiri nke ọma dịka o kwere mee. Achọpụtala usoro dị iche iche na usoro niile yana ihe ọkụ ọkụ na mmiri na-enye mmiri iji nye mmiri na nduku osisi nke ọma dịka o kwere mee. “Anyị ga-ejikọtakarị akụnụba mmiri dị mma. Usoro a na - eme ka ị hụ usoro ziri ezi n'ụzọ ziri ezi, "Tijms na - ekwu.
Na-anwale ihe ngosipụta nke mepụtara .
“A na-echekarị na mmiri anaghị agba mmiri dị oke ọnụ,” ka Gerard Schoot Uiterkamp nke onye mbubata mbata nke Toro bụ Jean Heybroek na-ekwu. Ozugbo teepu na-atanye mmiri na ala, ọ na-enye ọtụtụ ezumike karịa. A sị ka e kwuwe, ịnwere ike ịgbanye mmiri ịgba mmiri ngwa ngwa ma gbakwunye mmiri n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ na-enyekwa ọtụtụ ihe doro anya na mkpụrụ ahụ. Na-akpali mmasị na Nchikota na ngwa nke nri, ma ọ bụ fertigation. ”
Enyemaka dị maka ndị sonyere na ọrụ ZOBAM, mana akụkụ ọrụ a ka na-akwụ otu akụkụ dị mkpa. Johan Tijms na-ekwu, sị, "Enyemaka bụ ego, mana karịa ihe niile, a ga-enwerịrị nkwenye siri ike na ogbugba mmiri n'ubi enwere ike mekwa ya n'ụzọ dị iche," ka Johan Tijms na-ekwu. Onye ọzọ nwere ike ịhụkwu na njikọta spam. Ekwenyesiri m ike banyere ogbugba mmiri n'ubi ụfọdụ. Dị ka ịgbanyụ ọkụ, ọ na-amalite na mmiri, ndị ọzọ ga-abịa mgbe e mesịrị. ”
Dabere na Schoot Uiterkamp, ​​ZOBAM malitere na obere ọkwa, yana ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye isi ha ọnụ. “Obere-na-okokụre. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a na-arụkọ ọrụ. Ugbu a, anyị ga-arụ ọrụ n'ọtụtụ buru ibu. Ọ bụ ya mere o ji bụrụzi ọrụ ZOBAM +. Igwe ọrụ nke gburugburu driptape bụ ihe dị mkpa n'echiche m. ”Mmepe nke a pụrụ iche, ọ bụ ezie na ndị niile sonyere ghọtara na ọ ka na-asụ ụzọ. "Ozugbo prototype e mepụtara na-anwale, na grinder ga-abụ na a ga-eji ọzọ mezue ihe ndị dị mkpa," na-eche onye ọrụ ngo Mechielsen. Johan Tijms na-atụ anya nke ahụ.
Nsonaazụ nke nnwale mbụ na teepu ntapụ, kụrụ ma tinye mkpuchi uzuzu n'otu uzo.
Kọ yabasị na ọkwa dị elu
Ndị ọrụ ngo ahụ na-ahụ nnukwu ohere na yabasị karịsịa. Mpaghara yabasị na Drenthe na-eto n'ike n'ike. “N’agbanyeghị na ájá nwere ihe ndị ọ na-agaghị emeli, ala ebe a dị ọcha. Na Zeeland na polder, ndị mmadụ na-arịwanye elu na-ebute ọrịa ndị metụtara ala. Sandjá na-eto eto dị iche, mana anyị na-enwe ezigbo ọganiihu. Nke ahụ malitere na ozuzu. Iche-iche nke na-eweta oke mma. Fatịlaịza na nchebe ihe ọkụkụ bụ ihe ọzọ. Onye na-ere ahịa ihe ubi Johan Schuitema nke Mussel sokwa na ọrụ ahụ. Site na ọdụ ụgbọ elu RMA, anyị ga-eleba anya na mmiri nke anyị na-edozi ịmịpụ mmiri mmiri. ”Northern Netherlands Agricultural Laboratory na-eduzi ọmụmụ ihe niile na ọkwa nke ala. "N'ụzọ dị otú a, e buliri ịzụlite yabasị na ọkwa dị elu ọnụ."
Mgbanwe mkpụrụ nke mgbanwe bụ ihe dị mkpa, n'ihi na teepu na-akụ mmiri, ịgha mkpụrụ na mgbochi uzuzu ga-atọgbọ n'otu ngafe. Enwere ike itinye ihe dị ka narị mita asatọ nke teepu mmiri site na isi iyi ahụ. “Enwere teepu nke nwere dayameta nke milimita 22 dị maka ngwugwu ndị ahụ dị ogologo. N'ọtụtụ ọnọdụ, millimita 16 ezuola, "ka Gerard Schoot Uiterkamp na-ekwu.
Mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ịbụ Mechielsen kwụgidere ya na New Holland T6.180, n'ihi na mkpụrụ osisi ahụ ga-abụ nke siri ike. Ọ bụchaghị n'ihi ịnyịnya ike, mana ọ bụ maka ikike ibuli. Na ngụkọta, mkpụrụ osisi ahụ ga-enwe ịdị arọ nke ihe dịka tọn 6.5. “Mpịakọta teepu ndị ahụ dịkwa kilogram iri atọ n’otu n’otu. Tank dị n'ihu maka stachi emulsion agaghị abụ okomoko. ”
Edo àgwà na ụba mkpụrụ
Ndị otu na-esonye na-atụ anya ịdị mma edo edo na nlọghachi dị oke mkpa. “Anyị nwere nhọrọ nke ịwụnye mgbapụta na ibé na-arụ ọrụ na ike anyanwụ. Site na nnyefe nke 0.3 lita kwa elekere kwa awa ọ bụla, a ga-achọ obere nrụgide. Obere nrụgide chọrọ obere mgbapụta, yabụ nnukwu mgbapụta anyị na-eji ga-achọ naanị kilowatts anọ, ”ka Johan Tijms na-ekwu. Igwe mgbapụta nke ike anyanwụ na-azọpụtakwa mmanụ dizel ma si otú a belata Mbelata CO2. “Ọ bụ n'enweghị ihe kpatara ya na ndị ọchịchị na-elezi anya nke ọma.” Ngwa nke ihe mkpuchi uzuzu uzuzu nwekwara ike ịbụ ihe mgbakwunye na-adọrọ mmasị. “Ọ bụ ịgba chaa chaa, ma anyị kwenyere na ya. Starch emulsion bụ naanị sirop, nke na-eme ka ájá dị arọ. Mgbe mbu mmiri ozuzo anyị hụrụ na ọ na-arụ ọrụ,
Biodegradable ntapu teepu
Nzọụkwụ ọzọ na mmiri ntanye mmiri nwere ike ịbụ teepu biodegradable. Schoot Uiterkamp: “Toro AquaTraxx bụ sooks nke e ji polyethylene mee, ihe a na-emegharị emegharị n’ụzọ dị mfe, nke na-enweghịkwa nke ga-afọdụ. Innovation na-aga n'ihu. Mmepe nke ntapu gaghị enwe ike ịkwụsị. ”
Nke a bụ edemede sitere na akwụkwọ akụkọ ugbo ala anyị. De Akkerbouwkrant na akwa ahụ n'efu?
Agha, ntapu teepu na mgbochi ájá cover ke kiet ke otu ngafe
/ mmiri-teknụzụ /
Tags: Ripgba mmiri mmiriogbugba mmiri n'ubinjikwa ala
Isi ihe na-eme ka tuber na-amị mkpụrụ nduku: ịgba mmiri mmiri n'oge kwesịrị ekwesị
Nduku na-eto eto na Gris
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ ọhụụ na-eme ka arụmọrụ dị elu
UTZ AJ QJ FO nri ga-ebido ụzọ pụrụ iche